၂၄ မေ၊ ၂၀၂၂
FILE - Police officers escort Pakistani journalist Mohsin Baig, center, for his court appearance, in Islamabad, Pakistan, Feb. 16, 2022. Police arrested Baig at his home on unspecified charges, his colleagues and local media said.
ပါကစ္စတန် ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းသမားနဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ တင်ဆက်သူ အနည်းဆုံး ၆ ဦးကို သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေ အပေါ် လက်တုံ့ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ ရာဇဝတ်ကြောင်းနဲ့ စတင် အရေးယူလိုက်ကြောင်း အမှုဖွင့်ခံရသူတွေရဲ့ ရှေ့နေတွေက တနလာင်္နေ့မှာ အထက်တရားရုံးတခုမှာ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
သတင်းသမားတွေဟာ စစ်တပ်နဲ့ နိုင်ငံပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အမုန်းတရားဖြန့်ဝေမှုတွေကို သူတို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြနေတယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး မျိုးချစ် နိုင်ငံသားများလို့ ဆိုသူတွေက နိုင်ငံတဝန်း မြို့တွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း အတွင်း ရဲထံ တိုင်ကြားတဲ့ အမှုတွေဟာ အမျိုးအစားတူ အမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန် ဝန်ကြီးချုပ် Imran Khan ကတော့ ဒီအမှုတွေဟာ နိုင်ငံရေး အရ လက်တုံ့ပြန်မှုလို့ သုံးနှုန်း ပြောဆိုလိုက်ပြီး ဒီအမှုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အစိုးရ ပတ်သက်နေတယ်လို့လည်း စွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်ရဲ့ အီလက်ထရောနစ် မီဒီယာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အာဏာပိုင် အဖွဲ့ PEMRA က ဒီဂျစ်တယ် သတင်းဌာနတွေနဲ့ အသံလွှင့်သူတွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံ အဖွဲ့အစည်းတွေ အထူးသဖြင့် တရားရေးနဲ့ စစ်တပ်ကို လှောင်ပြောင် သရော်မှုတွေကို သတိပေးတဲ့ ကြေညာချက်ကို တနလာင်္နေ့က ထုတ်ပြန်မှုနဲ့လည်း အခု သတင်းသမားတွေ အပေါ် ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ အမှုဖွင့်တာတွေက တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။
ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိရင်တော့ ရုပ်သံလွှင့်တာတွေကို ချင်းချက် ရပ်ဆိုင်းပြီး ဒဏ်ကြေးလည်း ချမှတ်တာနဲ့ ကြုံရနိုင်ကြောင်း ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု၊ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေမှုနဲ့ အီလက်ထရောနစ် မီဒီယာ လိုင်စင်တွေထုတ်ပေးပြီး စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းတဲ့ ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့အစည်း တခု ဖြစ်တဲ့ PEMRA က သတိပေးထားပါတယ်။
မေလ ၉ ရက်နေ့မှာလည်း အလားတူ သတိပေးချက်မျိုးကို Pemra အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ တရားဝင် တရားစွဲဆိုခံရပြီး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရရင်တော့ သတင်းသမားတွေ အနေနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်နဲ့ အထက်နဲ့ ငွေဒဏ် ချမှတ်ခံရနိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။
ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကို ဝေဖန်တဲ့ သတင်းသမားတွေ ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ အရေးယူခံရ
ပါကစ်စတနျစဈတပျကို ဝဖေနျတဲ့ သတငျးသမားတှေ ရာဇဝတျကွောငျးအရ အရေးယူခံရ
ပါကစ်စတနျ ရဲတပျဖှဲ့က သတငျးသမားနဲ့ နိုငျငံရေး ဆှေးနှေးပှဲ တငျဆကျသူ အနညျးဆုံး ၆ ဦးကို သူတို့ရဲ့ လုပျငနျးဆောငျရှကျခကျြတှေ အပျေါ လကျတုံ့ပွနျတဲ့ အနနေဲ့ ရာဇဝတျကွောငျးနဲ့ စတငျ အရေးယူလိုကျကွောငျး အမှုဖှငျ့ခံရသူတှရေဲ့ ရှနေ့တှေကေ တနလာင်ျနမှေ့ာ အထကျတရားရုံးတခုမှာ တငျပွခဲ့ပါတယျ။
သတငျးသမားတှဟော စဈတပျနဲ့ နိုငျငံပိုငျ အဖှဲ့အစညျးတှကေို ဆနျ့ကငျြတဲ့ အမုနျးတရားဖွနျ့ဝမှေုတှကေို သူတို့ သတငျးတှမှော ဖျောပွနတေယျလို့ စှပျစှဲပွီး မြိုးခဈြ နိုငျငံသားမြားလို့ ဆိုသူတှကေ နိုငျငံတဝနျး မွို့တှမှော ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျး အတှငျး ရဲထံ တိုငျကွားတဲ့ အမှုတှဟော အမြိုးအစားတူ အမှုတှေ ဖွဈပါတယျ။
ပါကစ်စတနျ ဝနျကွီးခြုပျ Imran Khan ကတော့ ဒီအမှုတှဟော နိုငျငံရေး အရ လကျတုံ့ပွနျမှုလို့ သုံးနှုနျး ပွောဆိုလိုကျပွီး ဒီအမှုတှရေဲ့ နောကျကှယျမှာ အစိုးရ ပတျသကျနတေယျလို့လညျး စှပျစှဲလိုကျပါတယျ။ ပါကစ်စတနျရဲ့ အီလကျထရောနဈ မီဒီယာ စညျးကမျးထိနျးသိမျးရေး အာဏာပိုငျ အဖှဲ့ PEMRA က ဒီဂဈြတယျ သတငျးဌာနတှနေဲ့ အသံလှငျ့သူတှေ အနနေဲ့ နိုငျငံ အဖှဲ့အစညျးတှေ အထူးသဖွငျ့ တရားရေးနဲ့ စဈတပျကို လှောငျပွောငျ သရျောမှုတှကေို သတိပေးတဲ့ ကွညောခကျြကို တနလာင်ျနကေ့ ထုတျပွနျမှုနဲ့လညျး အခု သတငျးသမားတှေ အပျေါ ရာဇဝတျကွောငျးအရ အမှုဖှငျ့တာတှကေ တိုကျဆိုငျနပေါတယျ။
ခြိုးဖောကျမှုတှေ ရှိရငျတော့ ရုပျသံလှငျ့တာတှကေို ခငျြးခကျြ ရပျဆိုငျးပွီး ဒဏျကွေးလညျး ခမြှတျတာနဲ့ ကွုံရနိုငျကွောငျး ရုပျသံထုတျလှငျ့မှု၊ ရိုကျနှိပျထုတျဝမှေုနဲ့ အီလကျထရောနဈ မီဒီယာ လိုငျစငျတှထေုတျပေးပွီး စညျးကမျး ထိနျးသိမျးတဲ့ ပွညျထောငျစု အဖှဲ့အစညျး တခု ဖွဈတဲ့ PEMRA က သတိပေးထားပါတယျ။
မလေ ၉ ရကျနမှေ့ာလညျး အလားတူ သတိပေးခကျြမြိုးကို Pemra အဖှဲ့က ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ တရားဝငျ တရားစှဲဆိုခံရပွီး ပွဈဒဏျခမြှတျခံရရငျတော့ သတငျးသမားတှေ အနနေဲ့ ထောငျဒဏျ ၇ နှဈနဲ့ အထကျနဲ့ ငှဒေဏျ ခမြှတျခံရနိုငျခွေ ရှိပါတယျ။
ပါကစ္စတန် ကားဗုံးပေါက်ကွဲမှု တရုတ်နိုင်ငံသား ၃ ဦးနဲ့ ယာဉ်မောင်းသေဆုံး
ပါကစ္စတန် ဝန်ကြီးချုပ်သစ် ရွေးဖို့ပြင်ဆင်
ပါကစ္စတန်လွှတ်တော်က ဝန်ကြီးချုပ် Imran Khan ကို ဖြုတ်ချ